Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Philippine oo Xaalad Deg Deg Ah Kusoo Rogay Jasiirada Mindanao.
Madaxwaynaha Philippine oo Xaalad Deg Deg Ah Kusoo Rogay Jasiirada Mindanao.
Madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte ayaa xaalad deg deg ah kusoo rogay jasiirada Mindanao oo ku taala koonfurta wadankaasi, halkaasi oo ay ka dagaalamayaan kooxo xagjir ah oo xidhiidh laleh Daacish.
Madaxweynaha Filibiin oo socdaal ku jooga dalka Ruushka ayaa sheegay inuu gacan adag ku qaban doono kooxaha dowladiisa la dagaalamaya. Xukunka xaalada deg degta ah oo isla markiiba la dhaqan geliyey ayaa lagu wadaa inuu socdo illaa muddo 60 maalmood ah.
Jasiirada Mindanao ayey muddo dheer ka taagneyd xiisad u dhaxeysa dadka deegaankaasi u badan Muslimiinta iyo dowlada dhexe, waxaana muddo dheer halkaasi kasocday kacdoon hubeysan.
Balse xaalada jasiiradaasi ayaa maalmihii lasoo dhaafay faraha ka baxaday kadib markii koox lagu qiyaasay 100 maleeshiyo la sheegayo inay xiriir laleeyihiin kooxda xagjirka ah ee Daacish ay isku gadaameen magaalada ugu weyn jasiiradaasi ee Marawi oo 816km u jirta caasimada Manila, halkaasi oo ay kula dagaalamayaan ciidamada dowlada.
Dagaalka ka socda magaalada Marawi ayey ku dhinteen ugu yaraan sadex kamid ah ciidamada dowlada iyadoo tobaneeyo askar ah lagu dhaawacay.
Maleeshiyaada weerarka soo qaaday ayaa gubay kaniisadii ugu weyneyd ee magaalada, Xabsiga magaalada iyo qaar kamid ah Iskuulada. Xoogagan ayaa sidoo kale la wareegay wadooyinka iyo buundooyinka taga magaaladaasi oo ay ku nool yihiin 200 kun qof.
Kooxdan oo horey uga tirsnaan jirtay Maleeshiyadii Abu Sayef ayaa sheegay inay ku biireen Daacish ayaa la wareegtay magaalada Marawi ayaa sidoo kale ku sugan Xarunta Dowladaha hoose, jaamacada magaaladaasi iyo Isbitaalka guud ee magaaladaasi oo ay dowlada maamusho.